Ogaden News Agency (ONA) – Gumaysiga Itoobiya oo Sheegay Inuu Soo Afjarayo dagaalkii dhinaca xaduuda ee kala dhaxeeyay Eritrea.
Gumaysiga Itoobiya oo Sheegay Inuu Soo Afjarayo dagaalkii dhinaca xaduuda ee kala dhaxeeyay Eritrea.
Posted by Wariye Qaran	/ June 7, 2018
War ka soo baxay gumaysiga Itoobiya ayaa lagu sheegay in ay u hogaansamayso go’aanadii hore ay u gaareen guddi loo saaray xadka labada dal taasoo loo xukmiyay dhul ay ka mid tahay degmada Badme dowlada Eritrea.
Tallaabdan ayaan la ogayn inay soo afjari doonto dagaalkii mudada dheer soo jiray ee u dhaxeeyay labada dal kaa oo ay ku dhinteen ku dhawaad 80 Kun oo ruux.
Xukkuumadda uu hogaamiyo ra’iisal wasaaraha cusub ee gumaysiga Itoobiya Abiye Ahmed ayaa taallaabadan u qaaday si loogu gogol xaaro nabad lagu soo dabaalo xadka labada dal, waxaana la filayaa in dhawaan ciidamada gumaysiga Itoobiya laga saaro dhulkaa.
Go’aankan oo ahaa mid lama filaan ah ayaa dadka u dhuundaloola siyaasada geeska Afrika waxa ay sheegayaan in ay timid kadib markii xukuumada Woyaanaha ay garowsatay inay baahi weyn u qabto inay heshiis la gaarto dalka Eritrea oo ah gobol ka go’ay Itoobiya.
Gumaysiga Itoobiya ayaa wuxuu mudooyinkii ugu danbeeyay la daalaa dhacaayay kacdoono iyo mudaaharaado looga soo horjeedo xukunkiisa macangaga ah.